Dubbiin hayyoota Oromoo fuula gurraachesse kun dubbii jabaadha. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDubbiin hayyoota Oromoo fuula gurraachesse kun dubbii jabaadha.
Dubbiin hayyoota Oromoo fuula gurraachesse kun dubbii jabaadha. Dubbiin qabsoo Oromoo butamuu ifa tahee jiraa jedhani hayyoonni keenya. Dubbisaa SHARE godhaa.
Qabsoon butamee jira. mirga qabna jennee tikfannu of harkaa hin qabnu; reeffa ilmaan keenyaa lakkaawuu , ebelufaa hidhamaniiruu jennee gabaasnee fixuu sadarkaa dandeenyu irra hin jirru.
Mana keenyatti nutti roorrifamaa jira. Maatii keenya tikfachuu, du’aa fi reebicha irraa oolfachuu hin dandeenye.
Qabeenyi keenya saamamuu irraa hin oolle. Tuffatamuun keenya hin hafne. Qe’ee keenyatti orma taanee jirra. Obsi keenya sodaa fakkaateera, dhugaadhasi.
Ijoolleen hiyyeessaa nuti mirga isaaniif falminuuf kaayyoo ormaa bakkaan gahuuf gara jabinaan saba ofiirratti bobba’anii jiru.
Haalli nuti keessa jirru isa gaafa qabsoo Diddaa Gabrummaa jalqabneetiin gadi tahee jira.
Kun itti fufuu hin qabu. Yoo itti fufe, hanga har’a geenyu bor gahuu akka hin dandeenye beekuu qabna. Oromoon haalli akka kanatti akka itti fufamu barbaadu jira jennee hin amannu.
Kanaaf, qabsoo haala keessa jirruun wal gitu atattamaan eegaluun barbaachisaadha. Dursa namuu waan isarraa eegamu beekuu fi qooda ofii bahuu barbaachisa.
Barri jal’inaa ni raawwata
Horaa Bulaa ! Baqqalaa Garbaatiin
Oromia Daily Voice
Seenaa Jaal Goollicha Dheengee Bonayya!